Sula ishidi le-acrylic elicijile, i-China Clear cast acrylic sheet Manufacturers, Suppliers, Factory - Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd.
Ikhaya>Product>Sula Ishidi Le-Acrylic
Sula ishidi le-acrylic cast
I-clear cast cast acrylic sheet sheet ingaphezu kwama-92%, inesisindo samangqamuzana aphezulu, ukuqina okuhle kakhulu, amandla nokumelana namakhemikhali okuhle kakhulu.Isetshenziswa emgqeni wokukhangisa wokuphrinta nokuqoshwa, kanye nemikhiqizo yezandla.
Ishidi le-Acrylic liyipulasitiki ewusizo, ecacile efana nengilazi, kodwa inezakhiwo ezenza ibe ngaphezu kwengilazi ngezindlela eziningi. I-Acrylic inikezela ngokudluliswa kokukhanya okuphezulu futhi ingakheka kalula ngokushisa ngaphandle kokulahlekelwa ukucaca kokubona.
◇ Ukudlulisa okuphezulu kufika ku-92%;
◇ Eukumelana kwamakhemikhali nemishini: ukumelana ne-asidi ne-alkali;
◇ Ukwenziwa Kalula: Ishidi le-Acrylic lingapendwa, lihlolwe ngosilika, lifakwe i-vacuum-coated, futhi lingasaha, libhobolwe futhi lifakwe ngomshini. ukwenza cishe noma yimuphi umumo lapho ishiselwe esimweni esiphendulekayo.
◇ Wonke amashidi e-acrylic ahlanganiswe ne-UV, amashidi esiqinisekiso awaphuzi uma usebenzisa ngaphandle, angasebenzisa ngaphandle iminyaka engu-8-10.
I-Thermal Expansion Coefficient Cmfcm/V < 6 × 10-5
Amashidi ethu e-acrylic asezingeni eliphakeme anokucaca okuhle kakhulu, isimo sezulu namandla aphezulu. Angenziwa enziwe nge-thermoform, asikwe, abholwe, agotshwe, enziwe ngomshini, aqoshwe, apholishwe futhi anamathiselwe ngeglue. Angafakwa emibhalweni nasezikhangisweni/isithiyo sezokwelapha/e-acrylic/impahla/i-sanitaryware/izakhiwo/umklamo wangaphakathi kanye nefenisha/izimoto/ukuzijabulisa/izincwadi zokubhala zasehhovisi. / ubucwebe be-acrylic nokunye.